Yenza amacandelo eminqamlezo kunye ne-CivilCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Velisa amacandelo cross CivilCAD
Velisa amacandelo cross CivilCAD
Nalo eli nqaku banikela ubuso omtsha umamkele indawo esemthethweni KwiCACC, umsebenzi omhle wabahlobo be-ARQCOM ngethuba lokuzalisekisa iminyaka eyi-15 kunye nabasebenzisi abangaphezu kwe-20,000 eLatin America.
Kwicandelo lalo elitsha elithi "Tutorials", imisebenzi enomdla enengqiqo yesinyathelo ngesinyathelo ibandakanyiwe. Kule meko ndifuna ukubonisa umzekelo wokuvelisa amacandelo anqamlezayo kunye ne-axis ephakathi usebenzisa i-CivilCAD.
Olu titshala lwakhiwe kwizigaba ezine:
1. Ukwakhiwa kwemodeli yomhlaba wedijithali. Jonga uqeqesho
Ekuqaleni isingeniso kwifomathi yamanqaku enziwe, kuba kulo mhlaba umhlaba onolwazi usebenza kule fom elandelayo:
Inombolo yepaji, X ulungelelaniso, u-Y ulungelelaniso, ukuphakama, iinkcukacha
Emva kokungeniswa kwamaphuzu ukulungiswa kwe-triangulation kwisizukulwana se-digital model ichazwe.
Ekugqibeleni, ukwakhiwa kwamanqabunga enqanaba kuchazwa, kubonisa kwinqanaba ngalinye ugcino apho idatha igcinwa khona.
Iifayile ezisezantsi zifakiwe kwakhona ukuze umsebenzisi angayihlakulela inyathelo ngesinyathelo:
I-PuntosSB.txt apho amanqaku afakwe khona
Amacandelo ahlukeneyo (.dwg) owona mzobo wokugqibela
Idatha ye geometry (.sec) equlethe ifayile yokwakheka kwecandelo
2. Isizukulwana sesitishi kunye nomxube wendlela. Jonga uqeqesho
Kule nqanaba, i-axis yeprofayili yakhiwe, zeziphi izitulo eziveliswa zonke iimitha ze-10.
I-doactic ye-tutorial igcina ingcamango efanayo, ukuze umsebenzisi angazame yedwa, njengomzekelo:
Ngenxa yoko, senza: I-CivilCAD > I-Altimetry> I-Axis yeProjekthi> Izikhululo zeMarko
Inkqubo isicela ukuba sikhethe i-axis, siyichukumise kufuphi nalapho umgca uqala khona, senza ukungena ukuqinisekiswa ukuba siyavumelana nesi-nomenclature 0 + 00.
Emva koko inkqubo ibuza ubude beli candelo kwicala lasekunene nakwesobunxele. Siza kusebenzisa kulo mzekelo25.00 kumacala omabini.
Emva koko inkqubo icela ukuba yeyiphi ifom esiya kukhetha izitishi:
Ikhefu, uthetha kumgama ofanayo, umzekelo kwiimitha ezili-20 nganye.
Umgama, kuthetha kumgama othile ukusuka kwimvelaphi, umzekelo weemitha ze-35.25.
Isikhululo, xa sinethemba lokungena kwifom yesitishi, njenge 0 + 35.20
Dot, oku kungukuthi sifuna ukuyibonisa nge-pointer kumgca
Ukugqiba, ukugqiba inkqubo.
Kule meko, siya kusebenzisa ipharamitha yokuqala, (Interval) ukuze sibhale ileta I, kwaye siyakwenzafaka.
Ekupheleni kweli nqanaba iziqendu zomhlaba zendalo zakhiwe.
3. Ukwakhiwa koyilo Jonga uqeqesho
Kule nqanaba, uyilo lutsaliwe kwiprofayili eyakhiwe kwicandelo elidlulileyo, ebonisa iirveve ezime nkqo kunye neelebheli zamanqaku anomdla kwigophe (PCV, PIV, PTV). Kwakhona amathambeka.
4. Uhlobo lokwakheka kwesigaba. Jonga uqeqesho
Njengomlinganiselo wokugqibela, uqeqesho lubonisa ukwakhiwa kwecandelo eliqhelekileyo kwibakala.
Njengoko isebenza ne-CivilCAD, umaleko osisiseko, ifolda kunye namathambeka akhiwe. Umbongo uyafana ...
Buyela kwipaneli yasekuqaleni, sisondele ukulungelelanisa iinqanaba zomnqamlezo.
Amaqhosha aphantsi anokuvumela ukuba uqwalasele ezinye iinketho ezinje:
ICuneta. Kuyakwazi ukuchaza ukuba sifuna ukuba umgodla uthathelwe ingqalelo kuphela kwiziphelo apho kunqunywe khona kwaye akukho ndawo ikhonkco (ukuzalisa umthamo). Sinokukhetha kwakhona ukuba singabonwa njengobuncwane kunoma yiyiphi na embi, kunye nobukhulu.
Isikali Apha sichaza umlinganiselo wezilinganiso ezizenzekelayo kunye nezingezantsi ukudweba kwicandelo ngalinye.
Khetha Nazi ezinye iindlela ezikhoyo phakathi kwegridi engezantsi, ecacileyo kunye nezinye izibalo ezingaphandle kwesi sifundo.
Ngaphambi kokuba senze njalo, sinokujonga ngendlela abaza kujonga ngayo. Oku kwenziwa ngeqhosha Uhlolo. Apha ungabona isitishi ngasinye kunye nomzobo walo, ukuphakama kwinqanaba eliphakathi, ukusika kunye nokugquma. Ngeqhosha ukwamukela sibuyela kwipaneli enkulu.
Kwaye ngamacandelo aphuhliswa kunye neprofayili.
Thina ukuncoma iinzame ARQCOM, kuba ngokuqinisekileyo le Iimfundiso ziya kuphucula izixhobo zolawulo amava ngumsebenzisi babalekayo kuquka 2013 kwi AutoCAD, Bricscad V12 PRO kwaye kwisithuba iintsuku ZWCAD nezinye zitshiphu ku AutoCAD.
AutoCAD 2013 KwiCACC
Yintoni eye yaba inguqulo ye AutoCAD?
Jonga u-UTM ulungelelanise kwiGoogle Maps, kwaye usebenzisa UNYAKA! Olunye ulungelelaniso lwenkqubo
kwaye ukuba ndifuna ukwenza okufanayo kodwa ngamacandelwana ahambayo angenawo ububanzi obufanayo besithsaba, ukuba azinjalo, ayenokuba
UWalter J. Padilla P. uthi:
Ndicinga ukuba kulungile, siyabonga ngesixhobo esikhulu sokwakha.
Ukuvavanya iSokkia Isitishi esipheleleyo SET 630RK